Maitiro ekudzima zvachose data kubva kuApple Watch. Dzosera kumagadzirirwo efekitori | Ndinobva mac
Maitiro ekudzima zvachose data kubva kuApple Watch. Dzosera kumagadzirirwo efekitori
Vamwe vevashandisi vatsva uye kunyanya vashandisi vane mumaoko eApple Watch, vangave vachifunga kutengeswa kweizvi kuti vachinje modhi, vanofanira kuitora kuApple nekuda kwekukanganisa kwefekitori kana kungoda kujekesa wachi wachi uye marongero. Mune ino kesi, iwe unofanirwa kuita nhanho dzinoverengeka kudzima marongero ewawo pachawo uye marongero atinawo pane yakabatana iPhone, saka nhasi tichaona mabviro atingaite kubvisa zvese zvirimo kubva muchinhu uye kuzvisiya zvakagadzirira kutengesa kana kungotanga naye.
Chinhu chekutanga chatinozotaura ndechekuti hazvina kuoma kuita maitiro aya, asi iwe unofanirwa kutevera matanho mashoma. Tichatanga neawa uye chinhu chega chinofanirwa kutariswa mune izvi ndechekuti chishandiso chine bhatiri rakazara zvakazara, vanotipa zano hafu, asi zvirinani kana rakazara zvakakwana dzivisa matambudziko kana ukapera bhatiri painenge ichidzimwa. Matanho ndeaya:
Fambai Zvirongwa yeawa uye pinda General
Isu tinoenda pasi kune yekupedzisira sarudzo uye pfuurira mberi Dzosera, ipapo mukati Delete zvirimo uye marongero
Neiyi nzira izvo zvatinowana kudzoreredza kana kusiya yedu Apple Watch fekitori. Icho chiri nyore chaizvo uye unofanirwa kuve nemoyo murefu kusvikira wachi yapedza maitiro (zvinotora nguva) saka tinokuyambira nezve bhatiri. Kana iwe uchida iwe unogona kusanganisa Apple Watch kubva ku iPhone zvisati zvaitika, asi danho iri haridiwe. Kuti uite kudaro iwe unofanirwa kuvhura iko kunyorera IPhone Tarisa, tinya pane iyo info «Apple Tarisa ne -yako zita-»Dzvanya pa«i » iyo inobuda kurudyi uye «Unpair Apple Kutarisa«. Aya matanho haadiwe kana isu takambo fomati wachi. Chero zvazvingaitika, kudzima marongero eApple wachi kuri nyore kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekudzima zvachose data kubva kuApple Watch. Dzosera kumagadzirirwo efekitori
Iyo nyowani Apple Campus, mucherechedzo weruzivo uye nekuchenjerera
Argentina yatove neruzivo nezve mamiriro emigwagwa paApple Mepu